कथा : उड्न नसक्ने चील ! - Safal Stories
Home Short Stories कथा : उड्न नसक्ने चील !
चीलको एउटा अण्डा, कुनै कारणले वनकुखुराको गुँडमा पर्नपुग्यो । आफ्ना अण्डासंगै कुखुरीले त्यसलाई पनि कोरली । समय आएपछि चीलको चल्लो अरुझैं बाहिर आयो । कुखुराका त बथानै चल्ला थिए, ऊ पनि तिनैमध्येको एक बन्यो । त्यसैले ती चल्लाहरु जे -जे गर्थे , ऊ पनि त्यहि त्यहि गर्थ्यो । ती कुखुराका चल्ला तलबाहेक माथि उडेनन् र ती चल्लालाई पछ्याउने कुखुरेचील पनि माथि उड्ने प्रयास गरेन ।
एकदिन कुखुरेचीलले फुर्तिसंग आकाशमा उड्दै गरेको एउटा चरो देख्यो । कुखुरेचीलले आफ्ना ती साथीहरुसंग सोध्यो, ” उडिरहेको, त्यो कुन चरो हो ?”
उसका साथीहरुले भने “त्यो चील हो । चील बडो बलवान हुन्छ, माथिमाथि उडीराख्न सक्छ । रहर लागेर के गर्नु ? कुखुरो भएकोले तिमी त्यसरी उड्न सक्दैनौ ।”
कुखुरेचीलले अरु सोचविचार नगरी, साथीहरुकै भनाईलाई सत्य मानिरह्यो । वनकुखुरो बनिबनि जीवन गुजारेर मर्यो । अन्तरदृष्टिको अभावले गर्दा उसले आफूलाई चिन्न सकेन । त्यहिकारण चील भएकै कारणले पाउने विशिष्ट अधिकार गुमायो । क्षमतावान प्राणीको रुपमा बाँच्नसक्थ्यो, त्यस अर्थमा उसको जीवन व्यर्थ गयो । चीलको वंशमा ऊ जित्न जन्मेको थियो, तर हारको भागिदार भएर मर्यो ।
चीलझैं आकाशको उचाइमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले, चीलको शैली सिक्नुपर्छ । सफल मान्छेहरु संग आफूलाई जोड्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि सफल नै बन्नुहुन्छ । त्यही किसिमले आफूलाई नकारात्मक मान्छेहरुसंग सम्बन्धित बनाइराख्दा, तपाईं पनि उनीहरु जस्तै भैदिनुहुन्छ । त्यस्तै कुरा काट्ने र खुट्टा तान्ने मान्छेहरुको वास्तै नगर्नुहोस्, तपाईं विजयी बन्नुहुन्छ ।
साभार : तपाईंको जित, पेज नं. ४० , लेखक : शिव खेडा तस्बिर स्रोत : गुगल
Nextम भगवान हुन चाहन्छु!!